Yonsei University - Tadisha phesheya e-South Korea
Yonsei University Yokuxhumana
Izwe : INingizimu Korea
isifinyezo : YU
Wasekelwa : 1885
abafundi (ngu.) : 39000
Ungakhohlwa xoxa Yonsei University
Bhalisa at Yonsei University
Yonsei University wavula umnyango lokuthola imfundo yanamuhla ephakeme ngesoni esisodwa kweyikhulu edlule. It has kusukela ngaleso sikhathi kwavela njengoba top nyuvesi isizwe sika yangasese futhi lifaka phakathi emayunivesithi wezwe yodumo. Ngokwakha umlando wethu kanye nesiko, Yonsei ngeke ngenkuthalo ikusasa elisha. Efuna ukuthola indawo yethu spectrum zoguquko civilizational, Yonsei ozohola olandelayo 100 iminyaka futhi ubhale umlando omusha.
Manje Yonsei University bangena ezweni amathuba esingazange sacabanga ukuthi sinawo. Encwadini isivunguvungu kugucuka massive, ukuthuthukiswa ngokushesha zokuxhumana kanye nobuchwepheshe zesayensi ngokukhethekile reshaping imfundiso eyunivesithi kanye nocwaningo imvelo ngokuphelele. Isidingo zilokhu model entsha imfundo esekela isizukulwane kulindeleke ukuba aphile isikhathi eside aze abe 100 iminyaka budzala. Ngakho, Yonsei University ukuguqula ucwaningo yayo, wehlelo lefundo zombelele, nasekusekeleni nokuphathwa ukuze ahole indlela in ucwaningo phambili-ukucabanga kanye nemfundo umphakathi ekushintsheni.
Nje kokumnika ulwazi ezikhethekile kakhulu, njengoba kwaba umkhuba emphakathini kwezezimboni esidlule, ngabe manje a senze abafundi ngeke aphile aze abone kokuphenduka ikhulu leminyaka entsha. Ngisho esikhathini lapho intelligence yokufakelwa oludlula ngabantu engqondweni yethu, Yonsei uzophendula ucingo kuphocelela amakhono zokudala ezingaba kwenziwe kuphela ngabantu. Yonsei ethuthuka izinhlelo ezihlukahlukene ukukatelela lekudala "umphakathi inethiwekhi." In the enkathini yesimanje, ekuxhumaneni njalo izingxenye ezihlukahlukene ulwazi kanye nobuchule ukwakha kumanethiwekhi akhale izinhlobo ezintsha ngokuphelele yolwazi kanye nombono.
Ngokwesibonelo, zesayensi phambili theory kanye lobuchwepheshe amakhono nanotechnology bephula izithiyo phakathi kwesayensi okuhlanzekile nobuchwepheshe Kusetshenziswe. Ukubambisana phakathi Humanities nesayensi yemvelo kuye kwaletha innovations ezazingakaze zicatshangwe ngaphambili. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi iminyango ekuvaleni lihlukana futhi ukhuthaze inkhulumomphendvulwano emkhatsini abacwaningi yezinye amasimu. Kuze kube manje, Ngiyakholelwa ukubaluleka lula "extelligence,Ingasetshenziselwa "ukuthuthukisa intelligence ngokusebenzisa kokubonisa imibono ngenye estranged bright. Creativity akuyona nje ikhono lokwenza lo ezingokoqobo angaphatheki, kodwa kunalokho yikhono ukuthatha kakade futhi wenze into entsha ngokusebenzisa izingosi engqondweni yethu.
Esikhathini esizayo, uzwela kanye nokwabelana kuyoba nje kubaluleke njengokugwema ukucabanga creative. Yonsei ngeke nibaxoshe umzamo ukubhekana "umphakathi onozwela" enjalo yabaholi ukhulisa abenza ukwabelana. Ngoba lo mphakathi we ikusasa, ukuphishekela uzuza siqu uzothathelwa indawo ukuhloniphana kanye nokwabelana ajabule futhi azwelane nabanye; umphakathi ngeke esabasekela kude "kusinda ezinamandla" zalo nesimo sengqondo futhi ubheke yokuzibeka, futhi wokuziqambela uyophendukela collectivism. Abasunguli be-Yonsei itshalwe ukubaluleka kokuya okungaphezu kokumane ukwabelana izinto ezibonakalayo futhi amakhono ngokwabelana ubuholi. Challenge futhi indalo, zokuxhumana kanye uzwela, ukwabelana nokucabangela, eyizigqila nangenhlonipho. Lawa amagugu esisenza nathi njengoba abaholi esizayo, futhi ngeke ukuzijayeza uphold njengoba Yonseians. Joyina ndawonye Yonsei ehola indlela eya esikhathini esizayo.
College of Business kanye nezomnotho
College of Life Isayensi Biotechnology
College Lemvelo Human
College of Science e Ezemfundo
Vula Okukhulu, University College
Underwood International College(UD freshman, ASD, KUDALA, iSSD, ISED)
School Integrated Technology, College of Engineering
Uhlelo Global - Oku-Major Uhlelo
Graduate School of Journalism futhi IMisa Ukuxhumana
Graduate School of Health Environment
Uyafuna xoxa Yonsei University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Yonsei University kumephu
Izibuyekezo Yonsei University
Joyina ukuxoxa ka Yonsei University.
Amanye amanyuvesi eNingizimu Korea
Hankuk University of Studies Foreign Seoul
buyekeza University Suweon